Inqubekela phambili yomsebenzi wasensimini: Ukutshala sekusondele ukuqeda
Jun 02, 12:01
Ngokwemininingwane yokusebenza kwezinhlangano zezokuphatha ezolimo eziyimboni yezolimo yaseRussia, kusukela ngoJuni 1, 2020, ezweni lonke, ukuhlwanyelwa kwentwasahlobo kwenziwa endaweni engamahektha angama-47,3 million, noma ama-91,1% endawo ebikezelwe (ama-2019 ezigidi zamahektha ngonyaka ka-47).
Kubandakanya ukuhlwanyelwa kwentwasahlobo eSifundeni Esisezingeni eliphansi endaweni engamahektare ayizigidi eziyi-4,9, noma ama-86,5% wesimo sezulu, esifundeni saseNyakatho neCaucasus Federal - amahektha ayi-1,7 million noma ama-95,1% wesimo sezulu, esifundazweni esiphakathi Izigidi ezingama-8,9 ha noma u-94,4% wesibikezelo, esifundeni iVolga Federal District - 14,8 million ha noma 95,1% wesibikezeli, eSifundeni Sombuso saseSiberia - ama-11,4 million ha noma ama-93,6% wesibikezelo, I-Ural Federal District - amahektha ayi-3,8 million, noma ama-88,5% wesimo sezulu, esifundeni saseNyakatho Ntshonalanga - amahektha ayinkulungwane angama-291,9, noma ama-63,3% wesimo sezulu, esifundeni seFar East Federal District - amahektha ayi-1,4 million noma ama-57,4 , XNUMX% yesibikezeli.
Izilimo zasentwasahlobo ezweni lonke zihlwanyelwa endaweni engamahektare ayizigidi ezingama-27,9, noma u-95,7% wendawo ebekiwe (ngo-2019 - amahektha ayizigidi ezingama-27,1).
Kulezi, ukolweni wasentwasahlobo uhlwanyelwe endaweni engamahektare ayizigidi eziyi-12,1 noma 99,3% yendawo ebilindelwe, intwasahlobo yebusika - amahektha ayisigidi esingu-7,6 noma ama-96,5% endawo obekulindelwe, ummbila wokusanhlamvu - amahektha ayi-2,8 million noma i-103,1, I-182,5% yendawo obekulindelwe kuyo, ilayisi - ama-92,5 XNUMX ama-ha noma ama-XNUMX% endawo okuhlongozwayo.
Ama-beetets ushukela (ifektri) atshalwa endaweni engamahektare angama-930,5, noma ama-98,5% endawo okuhlongozwayo.
Ifilakisi elide lalitshalwa endaweni engamahektha ayinkulungwane ezingama-44,2 noma ama-90,9% endawo okuhlongozwayo.
I-sunflower ihlwanyelwa endaweni engamahektha ayi-7,8 million, noma ama-95,7% ale ndawo okuhlongozwayo.
Ukudlwengula kwentwasahlobo kuhlwanyelwa endaweni eyihektare eyizigidi eziyi-1,1, noma ama-87,2% endawo okuhlongozwayo.
I-Soya ihlwanyelwa endaweni engamahektare ayi-2,4 million, noma ama-74,9% endawo okuhlongozwayo.
Amazambane asezinkampanini zezolimo nasemapulazini abampofu (abalimi) atshalwe endaweni engamahektha ayi-253,4 82, noma i-XNUMX% yendawo ebekiwe.
Imifino esemabhizinisini ezolimo kanye nasezinkampanini ezifuywayo (ezifuywayo) ihlwanyelwa endaweni eyihektha ayi-150,9 81,4, noma ama-XNUMX% endawo okuhlongozwayo.
Tags: UMnyango Wezolimo waseRussia Federationukutshala amazambane ngo-2020umsebenzi wensimu yasentwasahlobo
UMkhandlu Wombuso ushintshe inqubo yokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane kanye ne-agrochemicals
Amabha amazambane angenwe nge-brown bola afika eRussia evela eChina
Umthetho weMbewu udinga ukuqedelwa
AbakwaRosselkhoznadzor bahlola amathani ayizinkulungwane ezimbili zamazambane amasha avela eAzerbaijan angeniswa eMoscow
Ngaphezulu kwamathani ayizinkulungwane eziyi-170 yemikhiqizo elawulwayo ethunyelwe ngaphesheya komngcele neKazakhstan